Cayman Islands COVID-19 Fanavaozana
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Cayman Islands COVID-19 Fanavaozana
Ny zoma 1 may 2020, nisy fanavaozana ny Nosy Cayman COVID-19 naseho tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izay nanambarana lalàna vaovao nanomboka ny alatsinainy 4 mey nandritra ny roa herinandro, raha jerena ny valim-panadinana mitohy mampahery. .
Na izany aza, ny fahaizana manokatra hetsika eo amin'ny fiarahamonina dia tokony hatonina am-pitandremana sy fijerena ny vokatra tsara azo androany izay noheverina fa tamin'ny alàlan'ny fifindran'ny vondrom-piarahamonina. Ny tanjona voalohany ataon'ny governemanta dia ny hamerenana ny fihanaky ny fihenan'ny virus amin'ny vondrom-piarahamonina, ary ny fiantohana ny fahasahiranana mianjady amin'ny orinasa sy ny olona dia hahena am-pitandremana.
Vokatry ny fitsipika vaovao nambara nandritra ny Cayman Islands COVID-19 fanavaozana, ny serivisy ilaina fanampiny izao dia misy ny serivisy paositra ho an'ny daholobe, ny fikojakojana ny dobo amin'ny sehatra tsy miankina, ny fikojakojana ny tany, ny asa fanaovan-tany ary ny fanaovana zaridaina; serivisy fanasan-damba amin'ny finday sy fanamboarana kodiarana finday, serivisy fanasan-damba sy fanasan-damba, mpamatsy fikarakarana fikolokoloana biby, fitantanana fanaintainana ary serivisy fanaintainana maharitra.
Ny fotodrafitrasa fandefasana vola dia nahafeno ny fepetra takian'ny Fahefana Mahefa mba hanomezana fahafaham-po izay ilaina Kaody COVID-19 ary hisokatra.
Naharitra adiny iray ny ora - nanomboka tamin'ny 6 maraina ka hatramin'ny 7 hariva - ho an'ny fanaterana sakafo any amin'ny trano fisakafoanana, fanaterana sakafo avy amin'ny orinasa hafa ary ny serivisy fitaterana enta-mavesatra ankehitriny izay naharitra hatramin'ny 10 alina; fivarotana lehibe, fivarotana mora vidy ary minimart, fivarotam-panafody, lasantsy na tobin-tsolika refill dia afaka misokatra adiny iray hatramin'ny 7 hariva.
Ny ora ho an'ny banky antsinjarany, ny fiarahamonina fananganana ary ny fikambananan'ny mpampindram-bola dia nitarina adiny telo, ankehitriny avela hisokatra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 4 hariva.
Amin'ny valiny 392, misy zavatra tsara iray avy amin'ny famindrana ny vondrom-piarahamonina amin'ny Grand Cayman sy ny negatif 391.
Fitsapana 1927 no efa natao tany amin'ireo nosy telo rehetra hatreto.
Raha ny tena manokana dia olona 949 no efa nandray anjara tamin'ny fanadinana fanadinana manerana ny nosy telo, ka ny 772 dia natao tao HSA ary 177 tao amin'ny Hopitaly Doktor.
Amin'ireo 74 miabo tsara hatreto dia 32 no simptetika, 28 no tsy simptomatika, telo naiditra HSA ary 2 tao amin'ny Health City, noho ny antony hafa, izay nanaporofo ihany koa fa manana COVID 19.
Ny komisera dia nanoritsoritra fepetra vaovao amin'ny curfews, ao anatin'izany ny fanovana sy ny fanitarana mba hampiasana fotoana. Raha mila tsipiriany feno dia jereo ny sidebar etsy ambany.
Na izany aza, voarara ny fanaovana fanatanjahan-tena ivelan'ny tokotanin'ny trano sy an-trano mandritra ny fanidiana ny tsy fahazoana mivezivezy mafy mandritra ny alahady 3 Mey sy 10 Mey rehetra.
Ny torapasika rehetra dia mitohy tsy voafetra mandritra ny roa herinandro ho avy rehefa tapitra ny daty farany.
Premier dia nanoritra ireo andininy ao amin'ny lalàna COVID 19 vaovao izay nanomboka ny alatsinainy maraina 5 may 4. Raha mila tsipiriany feno dia jereo ny bara etsy ambany.
Ny Nosy Cayman dia mifindra avy amin'ny fameperana avo lenta 5 (amin'izao fotoana izao) mankany amin'ny famoretana avo lenta amin'ny alatsinainy 4 mey miorina amin'ny fanombanana ny risika ao amin'ny fiarahamonina, ao anatin'izany ny valim-panadinana ambany ambany dia ambany ny valiny, 4 ny isan'ny fiantsoana mankany amin'ny laharan'ny gripa ary fidirana hopitaly ambany. Raha mandeha tsara ny zava-drehetra dia manantena izahay ny hifindra any amin'ny haavo 19 ao anatin'ny tapa-bolana rehefa hisokatra ho an'ny besinimaro toy ny fivarotana lehibe ny orinasa toy ny trano fitobiana sy fivarotana enta-mavesatra, mitazona ireo protokolola lavitra raha ilaina. Hiankina amin'ny valin'ny fitsapana izany.
Amin'izao fotoana izao, ny firenena dia amin'ny fomba fitiliana sy fitiliana misimisy kokoa, ny valiny dia mampahafantatra ny fanapahan-kevitry ny governemanta amin'ny fifindrana eo amin'ny ambaratonga fameperana sy ny fisokafan'ny fiaraha-monina sy ny asa aman-draharaha.
Ny fanamafisana dia mbola hitazonana ny halaviran'ny fiaraha-monina sy ny fialofana hafa ao an-trano. Nangataka faharetana izy mikasika ny tsy fisokafan'ny torapasika sy ny jono tsy ara-barotra mandritra ny tapa-bolana ho avy, izay tsy vitan'ny polisy amin'ny hetsika ary mampitombo ny risika amin'ny fampitana tanàna.
Fitsapana ny mponina rehetra ao amin'ny Little Cayman ary olona maherin'ny 245 ao amin'ny Cayman Brac no vita. Raha antenaina ny valiny, ny governemanta dia afaka manala fameperana amin'ny herinandro ambony, voalohany ho an'i Little Cayman ary avy eo Cayman Brac. Nangataka faharetana indray tamin'ireo mponina tao amin'ireo nosy izy.
Hanomboka tsy ho ela ny asa NRA izay ilaina sy voalamina tsara aorian'ny fanandramana ny 10% ny ekipany rahampitso sy ny valiny avy amin'ireo izay nahafa-po.
Ny tsenan'ny trondro, mivarotra trondro avy amin'ny hetsiky ny varotra Cayman, dia hifindra sy hisokatra eo amin'ny Cruise Dock (South Terminal) ary hiasa miaraka amin'ireo protokoleta lavitra. Toy izany koa, ny tsenan'i Hamlin Stephenson ao amin'ny Cricket Grounds (tsenan'ny Farmer) dia hanomboka hiasa ihany koa.
Ny lalàna vaovao dia hametrahana olona 6,000 eo amin'ny arabe.
Ny fiasa toy ny famongorana iguana maintso sy ny fanaraha-maso ny pest ao ivelan'ny trano sy ny tranobe dia azon'ireo orinasa mihatra amin'ny tompon'andraikitra mahefa amin'ny alàlan'ny curfewtime.ky hametraka ny raharahan'izy ireo amin'ny lalàna vaovao. Ny tanjona dia ny hiantohana ny fifandraisan'ny olombelona amin'ny olona farafahakeliny. Ny fepetra vaovao rehetra dia tsy alefa am-bato ary iharan'ny valim-panadinana tsara mitohy.
Ny fivarotana garazy sy kojakoja dia napetraka amin'ny fanokafana ihany amin'ny dingana manaraka.
Ny mpiasa tena ilaina rehetra dia mila mitondra taratasy avy amin'ny mpampiasa azy fotsiny fa mpiasa tena ilaina izy ireo hahafahan'izy ireo mahafeno ny mason-tsivan'ny polisy amin'ny fanatanterahana ny fepetra takiana amin'ny curfew.
Premier koa dia nanolotra ny fomba voatondro amin'izao fotoana izao amin'ny fikarakarana ny zanaka eo amin'ny ray aman-dreny. Ankoatr'izay, tsy fanitsakitsahana ny curfew malefaka na mafy ho an'ireo izay iharan'ny herisetra an-tokantrano ny mitady fialofana, na dia midika izany aza ny fanaovana izany mandritra ny ora ora. Hijery misimisy kokoa etsy ambany sidebar.
Ny valiny ratsy 390 dia mampahery ary mampiharihary ny drafitra malina, azo raisina ary refesina an'ny governemanta, ampiarahana amin'ny "antsipiriany be dia be" dia miasa amin'ny fitantanana ny risika sy ny fandalinana teboka tsy miova.
Mikasika ny sidina famindrana dia feno ny sidina roa mankany La Ceiba. Ny mpandeha rehetra dia tokony handefa ny antontan-taratasim-pitsaboana takian'izy ireo amin'ny mpiasan'ny biraony, Maria Maria Leng, manomboka amin'ny andro anio amin'ny sidina alatsinainy ary amin'ny talata 5 mey ho an'ny sidina zoma 8 may. Email [email voaaro]
Ny sidina mankany Costa Rica dia hatao ny zoma 8 may. Antsoy ny CAL mivantana amin'ny 949-2311 hamandrika.
Ny sidina mankany amin'ny Repoblika Dominikanina dia miandry ny fanamafisana avy amin'izany governemanta izany.
Entanina ireo mitady sidina hifandray amin'ny emergencytravel.ky na hampiasa ilay fitaovana ao amin'ny www.exploregov.ky/travel.
Ny sambo Royal Navy nalefa tany Karaiba, ny RFA Argus dia hiala ny morontsirak'i Grand Cayman amin'ny Alatsinainy 4 Mey sy Talata 5 Mey miala an'i Cayman Brac ary manao fanazaran-tena. Raha mila tsipiriany, jereo sidebar etsy ambany.
Naneho ny fankasitrahany ny R3 Cayman Foundation sy ny National Recovery Fund izy. Ny antsipiriany dia amin'ny famotsorana iray hafa.
Tsy misy fiovana eo noho eo eo amin'ny asan'ny asam-panjakana.
Minisitry ny fahasalamana, Hon. John Seymour nanao hoe:
Nangataka tamin'ny olona ny minisitra fa mila mitazona ny fahasalamany ara-tsaina mandritra izao fotoan-tsarotra izao. Jereo ny sidebar etsy ambany.
Nanambara ny vola mitentina $ 1,000 indray mandeha izy ho an'ireo mpitendry zavamaneno ao an-toerana izay mahatsapa izany kely indrindra nandritra ny fanidiana ny indostrian'ny fizahantany. Ity vola ity dia aloa amin'ny faran'ny volana Mey. Hifandraisana tsirairay ireo mpitendry mozika. Ireo izay mitady vaovao dia afaka mandefa mailaka [email voaaro] na miantso ny 936-2369.
Ny MLA rehetra androany dia nomena saron-tava azo zaraina amin'ny mpiorina.
Ho toy ny refin'ny fiaraha-miasa isam-paritra, ny governemanta dia mandefa kitapo fitsapana miisa 5,000 any St. Lucia ary ho valiny dia mahazo pipet ilaina tokoa izy ireo, fitaovana tena ilaina amin'ny fizahana fitsapana.
30,000 XNUMX ny valin'ny PPE tonga, misaotra ny HCCI sy ny HSA.
Sidebar 1: Namoaka ny fanovana ny «curfew» ny kaomisera
Ny Kaomiseran'ny polisy Derek Byrne dia nanome antsipiriany momba ny fomba fampiharana ny famerana tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alàlan'ny famandrihana amin'ny alatsinainy 4 Mey ho avy izao. Hoy izy:
“Ny curfew malefaka na ny lalàna mifehy ny fialofana amin'ny toerany dia hiasa eo anelanelan'ny ora 5 maraina ka hatramin'ny 7 hariva isan'andro sy rahampitso sabotsy Alatsinainy 4 Mey 2020 ho avy izao dia hiova izany, maharitra adiny iray, ka hatramin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 8 hariva hariva ny Alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy.
Hard Curfew na fanidiana tanteraka, afa-tsy ireo mpiasan'ny serivisy tena ilaina tsy voatanisa dia hiasa amin'ny faran'ny herinandro ho avy izao izay rahampitso hariva sy rahampitso sabotsy eo anelanelan'ny ora amin'ny 7 hariva ka hatramin'ny 5 maraina. Alatsinainy 4 Mey 2020 ho avy izao dia hiova izany, hihena adiny iray, miaraka amin'ny fe-potoana tsy azo ihodivirana mafy isan-kariva eo anelanelan'ny adin'ny 8 hariva sy 5 maraina.
Ny vanim-potoanan'ny fampihetseham-batana tsy mihoatra ny 90 minitra dia avela eo anelanelan'ny adin'ny 5.15 maraina ka hatramin'ny 6.45 hariva anio sy rahampitso. Alatsinainy 4 mey ho avy izao ny fotoana fampihetseham-batana 90 minitra dia avela eo anelanelan'ny ora amin'ny 5.15 maraina ka hatramin'ny 7 hariva isan'andro Alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Tsy misy fotoana fanatanjahan-tena avela amin'ny alahady mandritra ny fe-potoana tsy fahazoana mivezivezy.
Ny Alahady 3 Mey 2020 ary Alahady 10 Mey 2020 dia hiasa mandritra ny ora tsy fahazoana mivezivezy mandritra ny 24 ora miaraka amin'ny hidim-bidy tsara amin'ireo daty roa ireo. Tsy misy olona hafa ankoatry ny mpiasan'ny serivisy tena ilaina afa-mivoaka afaka avela handao ny tranony amin'ireo daty ireo, na inona na inona antony. Ny fotoana fanaovana fanatanjahan-tena any amin'ny toeram-bahoaka dia tsy mahazo alalana amin'ireo daty roa ireo.
Fahazoana amoron-dranomasina ny morontsiraka manerana ny Nosy Cayman - Manomboka amin'ny zoma 1 Mey 2020 ka hatramin'ny zoma 15 Mey 2020 dia misy ny curfew mandritra ny 24 ora na fanidiana mafy ny torapasika rehetra manerana ny Nosy Cayman- midika izany fa tsy misy fidirana amin'ny torapasika ampahibemaso manerana ny Cayman Nosy amin'ny fotoana rehetra mandritra ny vanim-potoana eo anelanelan'ny ora 5 amin'ny Zoma 1 Mey 2020 sy 5 maraina ny Zoma 15 Mey 2020. Raha mazava, - izany dia mihidy mafy amin'ny morontsiraka rehetra manerana ny Nosy Cayman izay mandrara olona (s) manomboka amin'ny fidirana, fitsangatsanganana, filomanosana, snorkeling, jono, fanatanjahan-tena na fanaovana karazana hetsika an-dranomasina amin'ny morontsiraka ampahibemaso manerana ny Nosy Cayman. Mandritra ny zoma maraina 15 may amin'ny 5 ora maraina io fe-potoana io.
Ampahatsiahiviko ny olon-drehetra fa ny fanitsakitsahana ny didy tsy fahazoana mivezivezy mafy dia fandikan-dalàna mitentina 3,000 XNUMX KYD $ ary fanagadrana mandritra ny herintaona, na izy roa. ”
Sidebar 2: Ny fiovan'ny lalàna mifehy ny Premier
Ny fisorohana, ny fanaraha-maso ary ny famoretana ny lalàna Covid-19, 2020 ("ny lalàna"), izay manan-kery amin'ny 4 Mey 2020, dia manafoana sy manolo ny lalàna mifehy ny fahasalamana ho an'ny daholobe (fisorohana, fanaraha-maso ary fanakanana ny Covid-19) (tapakila) , 2020 ary ireo fanitsiana momba izany.
Tsara homarihina anefa fa ny fepetra "fialofana amin'ny toerana" dia mbola mijanona eo amin'ny toerany, na misy fanovana vitsivitsy aza.
Raha ny momba ny toeran'ny besinimaro dia toy izao ny fanovana -
Misokatra ho an'ny besinimaro izao ny trano fandefasana vola ary avela hiasa amin'ny fotoana rehetra mandritra ny ora 6:00 maraina sy 7:00 hariva, na izany aza, ny tranom-bola mandefa vola dia tsy maintsy miasa mifanaraka amin'ny fepetra apetraky ny mahefa. Authority.
Misokatra ho an'ny besinimaro izao ny paositra ary avela hiasa amin'ny fotoana rehetra mandritra ny ora 6:00 maraina sy 7:00 hariva.
Ny banky mpivarotra antsinjarany, ny fiarahamonina manangana trano ary ny sendika mpampindram-bola dia avela hiasa mandritra ny ora 9:00 maraina sy 4:00 hariva.
Mikasika ny FAMERENANA AMIN'NY ASA ATAO ASA FOTOTRA, ny fiovana dia izao manaraka izao -
Ny fitsidihana ireo andrim-pampianarana dia tsy avelan'ny olona izay mandray anjara amin'ny fanaparitahana na fanangonana fitaovam-pianarana avy amin'ireo andrim-pampianarana ireo.
Ny olona izao dia avela hitarika ny raharaham-barotra amin'ny serivisy mailaka na parcel, fa ny toerana anomezan'ilay olona ny fanangonana sy fandefasana mailaka na fonosana fotsiny ihany.
Ny olona izao dia avela hitarika ny asan'ny serivisy fikarakarana biby, fa amin'ny toerana izay anomezan'ilay olona ny fanangonana sy fandefasana ny biby fiompy ihany.
Ny olona izao dia avela hitarika ny asan'ny fivarotana antsinjarany, fa amin'ny toerana anomezan'ny olona ny fandefasana entana ihany.
Ny olona izao dia avela hitarika ny asan'ny mpivarotra fiara, fa amin'ny toerana anomezan'ny olona ny fandefasana fiara ihany.
Ny olona izao dia avela hitarika ny orinasa mpanasa lamba, fa amin'ny toerana anomezan'ilay olona ny fanangonana sy fandefasana ireo entana ihany.
Ny olona dia avela hitarika ny asa amin'ny serivisy fanasana fiara na serivisy fanamboarana kodiarana, fa amin'ny toerana anaovan'ilay olona serivisy fanasana fiara finday na serivisy fanamboarana kodiarana finday ihany.
Ireo olona manome serivisy fikojakojana dobo izao dia havela hiditra amin'ny dobo strata tsy miankina, fa ho fanadiovana sy fikojakojana ny pisinina ihany.
Raha ny momba ny FITORIANA SERVICES PERSONNEL, ireto olona manaraka ireto dia nampiana ho ao amin'ny lisitry ny olona tsy afaka amin'ny fialofana amin'ny lalàna mifehy azy, fa rehefa manao ny adidy ofisialy na asa mifandraika amin'ny asa izy ireo
Ireo olona manome serivisy fitantanana fanaintainana na olona manome fitsaboana fanaintainana maharitra.
Ireo olona izay mandray anjara amin'ny fizarana kojakojam-pianarana any amin'ireo toeram-pampianarana.
Ny mpiasan'ny paositra sy ny olona miasa amin'ny alàlan'ny serivisy mailaka na parcelera hanangonana sy handefasana mailaka sy fonosana.
Ireo olona miasa fivarotana antsinjarany sy olona ampiasain'izy ireo hanaterana entana.
Ireo olona mandray anjara amin'ny fanomezana tolotra fikarakarana biby sy olona ampiasain'izy ireo hanangona sy hanome biby fiompy.
Ireo olona mandray anjara amin'ny fikarakarana ny fikojakojana ny dobo, ny fikojakojana ny tany, ny asa fanaovan-tany ary ny zaridaina.
Ireo olona manome serivisy fanasana fiara finday na serivisy fanamboarana kodiarana finday.
Ireo olona manome serivisy fanasan-damba sy olona ampiasain'izy ireo amin'ny fanangonana sy fandefasana entana.
Ireo olona miasa fiara mpivarotra fiara sy olona ampiasain'izy ireo hanaterana fiara.
Izahay koa dia nanitatra ny fotoana mandra-pahatongan'ny olona izay manome serivisy fanaterana sakafo na serivisy fanaterana enta-madinika, ary koa nanitatra ny fotoana hanangonana olona.
Ireo olona ampiasain'ny trano fisakafoanana hanome serivisy fanaterana sakafo dia mety hanao izany hatramin'ny 10:00 alina.
Ireo olona ampiasain'ny orinasa hafa ankoatry ny trano fisakafoanana hanome sakafo na serivisy fanaterana enta-madinika dia mety hanao izany hatramin'ny 10:00 alina.
Ireo olona mandeha any amin'ny trano fisakafoanana izay manome familiana sakafo na familiana sakafo any an-toeran-kafa na mamatsy ny fividianana sakafo dia mety hanao izany hatramin'ny 7:00 hariva.
Mikasika ny EXERCISE dia avela hanao fanatanjahan-tena any ivelany ny olona mandritra ny adiny iray sy sasany isan'adiny, eo anelanelan'ny ora 5:15 ka hatramin'ny 7:00 hariva.
Ampahatsiahivina kosa ny olona fa tsy afaka manao fanatanjahan-tena manodidina na amin'ny pisinin-bahoaka na pisinina strata na amin'ny gym na ho an'ny daholobe na tsy miankina izy ireo.
Ampahatsiahivina ihany koa ny olona fa tsy afaka mitondra ny fiarany amina toerana na aiza na aiza izy ireo mba hanaovana fanazaran-tena.
Raha ny momba ny FITORIANA MAHASOA MBA HANAFANA FANJAKANA ara-dalàna dia efa nampidirinay an-tsokosoko ireo mpisolovava izay mila manao dia lavitra mba handray anjara na hisolo tena ny mpanjifany amin'ny raharaha ara-dalàna na mifandraika amin'izany.
Mikasika ny FITORIANA MAHASOA AMIN'NY TOERAM-PAHAMARINANA, dia nanampy birao paositra sy trano fampirimana vola izahay amin'ny lisitry ny toerana azon'ny olona anaovana dia ilaina mandritra ny andro voatondro.
Ireo olona izay tsy maintsy mandeha any amin'ny andrim-panabeazana mba hanangona fitaovam-pianarana dia tokony hanao izany koa amin'ny androny voatondro. Mazava ho azy fa tsy mihatra amin'ny olona tsy maintsy mizara ny fitaovam-pianarana io.
Raha tsiahivina, ny olona manana ny anarany ka manomboka amin'ny litera A ka K dia tokony hanao dia ilaina amin'ny fivarotana lehibe, fivarotana mora vidy ary minimart, banky fivarotana, fiarahamonim-pirenena sy sendika mpampindram-bola, tobin-tsolika na famerenana refes ary famindrana vola amin'ny alatsinainy, alarobia ary zoma. .
Ireo olona izay manana ny anarany dia manomboka amin'ny litera L ka hatramin'ny Z dia tsy maintsy manao dia lavitra amin'ny toerana noresahina tamin'ny talata, alakamisy ary asabotsy.
Ampahatsiahivina ihany koa ny olona fa raha manana anaram-bosotra roa-barika ny olona iray, ny anarana voalohany amin'ny anaram-bosotra roa sosona an'ny olona dia ny anarana ampiasaina amin'ny tanjona hamaritana ny andro nomena ny olona.
Ireo Fitsipika ireo dia hijanona eo amin'ny 4h Mey, 2020 ka hatramin'ny 18 Mey 2020, raha tsy hoe manitatra ny vanim-potoana ny Kabinetra.
Sidebar 3 - Manazava ny fiarovana ny praiminisitra, filàna fialofana
“Hita avy amin'ireo ahiahy nipoitra fa ny raharaha roa dia mety mitaky fanazavana:
Raha tsy miara-monina ny ray aman-dreny fa na amin'ny fifanarahana eo amin'izy ireo na amin'ny alàlan'ny didim-pitsarana, dia tsy maintsy manana alalana hiditra amin'ny zanany ho an'ny fikolokoloana sy fikarakarana iraisana, izy ireo dia manan-jo hanana izany fialofana izany amin'ny lalàna mifehy na eo aza izany.
Satria matetika ireo fifanarahana ireo dia amin'ny fifanarahana eo amin'ny ray aman-dreny fa tsy amin'ny alàlan'ny didim-pitsarana, dia tsy nilaina ny nitaky polisy tamin'izy ireo haneho didim-pitsarana. Raha tsy misy ny baiko dia ampy ny taratasy fifanarahana eo amin'ny ray aman-dreny.
Eo ambanin'ny Fitsipika araka izay nambara tany am-boalohany sy ankehitriny, dia mety hiala amin'ny toerana onenany ny olona iray mba tsy hampijaliana azy. Mety ao anatin'izany ny fanovana ny toeram-ponenan'ny olona noho izany antony izany. ” (Mihatra amin'ny toe-javatra misy herisetra an-tokantrano izany.)
Sidebar 4 - Governora Nanamarika ny asa nataon'ny RFA Argus
Rehefa manohy ny quarantine misy azy ireo ao amin'ny Island ny Team Advisory Security, RFA Argus, iray amin'ireo sambo mpiasan'ny Royal Navy Caribbean dia any amin'ny Nosy Cayman Alatsinainy 4 Mey (Grand Cayman) ary ny Talata 5 Mey (Cayman Brac).
Fitsidihana tena hafa noho ny mahazatra, tsy hanitsaka ny Nosy izy ireo, na handray mpitsidika ao anaty sambo, noho ny toe-javatra Covid-19.
Nidina an-tsambo ilay sambo Helicopters telo Merlin ary helikoptera Wildcat iray. Ny tanjon'izy ireo amin'ny alatsinainy dia ny hanidina helikoptera roa amin'ny maraina amin'ny fijanonan'i Grand Cayman sy angidimby roa amin'ny tolakandro amin'ny fampihetseham-po amin'ny alàlan'ny sambo RCIPS Marine Unit.
Io sambo io dia misy fivarotana Disaster Relief ao anatiny ihany koa, ary misy injenieran'ny Royal ary mpiasa manokana hafa afaka manampy amin'ny fanamboarana sy famerenana amin'ny laoniny ireo serivisy tena ilaina.
Ny helikoptera RCIPS dia hihaona amin'ny angidimby fiaramanidina Navy ary hanao familiarization amin'ny alàlan'ny radio amin'ny famolavolana malalaka. Izy ireo dia mitady faritra lehibe sy toerana fitsangantsanganana (tsy hisy ny fidinana an-tanety) ho fanomanana ny vanim-potoanan'ny rivodoza sy ny torolàlana ankapobeny momba ny Nosy.
Talata faha-5 - RFA Argus dia ho eo akaikin'ny Nosy Nosy ary hanao recce mitovy amin'i Little Cayman sy Cayman Brac. Averina indray, tsy hisy ny fidinana an-tanety.
Amin'ny fomba mahazatra, ny sambo dia hijanona ao amin'ny faritra mandritra ny vanim-potoana rivodoza ho fanampiana lehibe raha ilaina.
Ny fahafahantsika mitazona fanandramana COVID 19 manan-danja dia nomena tosika nandritry ny roa andro lasa izay nahitana swabs 52,000 izay ampiasaina hanangonana santionany. Ny savony 100,000 XNUMX fanampiny koa dia tokony ho tonga tsy ho ela. Toy ny famatsiana rehetra mifandraika amin'ny fizotran'ny fitsapana, ny swabs dia tsy ampy maneran-tany.
Misaotra ny ekipa Dart Logistics tarihin'i Chris Duggan, Gary Gibbs ary Simon Fenn izay ati-doha tamin'ny fandidiana ny famoahana ireo lamba avy amin'ny mpamokatra ao Shina. Ny ekipako dia niara-niasa tamin'i Dart sy ny British Consulate General ao Guangzhou mba hanampy amin'ny fanamorana ny famotsorana ny entana avy any Chine.
Vola fanampiana ny voina
Izahay praiminisitra dia faly miarahaba ny fananganana ny R3 Cayman Foundation sy ny famerenana amin'ny laoniny ny Cayman Islands National Recovery Fund, niforona taorian'ny rivodoza Ivan.
Feno fankasitrahana aho amin'ny olona rehetra miasa mba hahombiazan'ireo fandraisana andraikitra roa ireo sy amin'ireo mpamatsy vola izay nanokana ny fotoanany sy ny fananany. Ny fanomezana voalohany avy amin'i Ken Dart dia mpiorina lehibe. Hiara-miasa akaiky ireo vola roa ireo ary hahafahan'i Cayman hatanjaka kokoa amin'ny fiatrehana ireo fandrahonana atrehantsika rehetra amin'ny loza voajanahary sy nataon'olombelona.
Samy feno ny sidina mankany La Ceiba, Honduras. Ny mpandeha rehetra dia tsy maintsy mandefa ny taratasim-pahasalamany [email voaaro] amin'ny andro akaiky anio ho an'ny sidina ny Alatsinainy ary amin'ny Talata faha-5 ho an'ny sidina ny 8 Mey.
Ny sidina iray miaraka amin'i Cayman Airways mankany San Jose, Costa Rica dia voamarina ny zoma 8 may lasa teo. Azonao atao ny mamandrika mivantana ny tapakilanao amin'ny Cayman Airways amin'ny 949 2311
Nisy ny fangatahana nalefa tany amin'ny Governemanta Dominikanina Dominikanina ho sidina ary miandry ny fanamafisana izahay fa efa nahazo alalana. Manantena izahay fa hanambara zavatra amin'ny herinandro ambony.
Noho ny fahombiazan'ny fitaovana an-tserasera dia hifindra amin'ny ora vaovao manomboka ny alatsinainy 4 mey ny fanampiana Emergency Travel. Ny telefaona dia hotanterahina ny alatsinainy - zoma manomboka amin'ny 9 maraina - 1 hariva. Mbola azonao atao ny manoratra ny antsipirihanao amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fitaovana an-tserasera www.exploregov.ky/travel. ”
Sidebar 5: miresaka momba ny adin-tsaina avy amin'ny COVID-19 ny minisitra Seymour
“Androany aho te hiresaka aminao momba ny fahasalamana ara-tsaina. Araka ny fahafantaran'ny maro aminareo ity lohahevitra ity dia tena zava-dehibe amiko sy malalako ato am-poko.
Ny adin-tsaina, ny tebiteby ary ny famoizam-po mifandraika amin'ny fanidiana Coronavirus dia zavatra tsapantsika rehetra. Ny hevitra fa misy ny virus, ny mpanohitra tsy fantatra, tsy hita maso izay manimba erak'izao tontolo izao dia mavesatra amin'ny ankamaroan'ny olona rehetra.
Nahazo tatitra avy amin'ny olona teo amin'ny fiarahamonina aho, maro amin'izy ireo no miaina tranga ara-batana bebe kokoa, toy ny tsy fahitan-tory na aretin'andoha, nahena na nitombo ny fahazotoan-komana ohatra.
Ny sasany amintsika dia mety mahita ny tenantsika mampiasa zavatra tsy dia mahasalama loatra mba hanandramana miatrika azy; toy ny fifohana sigara na fisotroana tafahoatra. Ary na dia afaka miombom-pihetseham-po amintsika rehetra aza isika dia zava-dehibe ny mampatsiahy hatrany ny tenantsika fa ireo karazana fomba fiatrehana ireo dia mifanohitra amin'izay lazain'ny dokotera manerantany fa hataontsika izao. Toy ny nampahatsiahivin'i Dr. Lee antsika tamim-pitiavana ihany koa omaly ireo zavatra ireo dia mitondra mari-pahaizana momba ny fahasalamana mavesatra toy ny cirrhosis amin'ny aty sy ny homamiadan'ny havokavoka na misy krizy ara-pahasalamana na tsia.
Te hampahatsiahy anao aho fa mila maka tahiry daholo isika, na dia tsy mieritreritra aza ianao fa sahirana miatrika ny toe-javatra ankehitriny. Rehefa manohy miady an'io isika, raha lazaina ny marina, dia hahatsapa fihenjanana bebe kokoa amin'ny fiainantsika isika. Na amin'ny fiandrasana ny valim-panadinana na ny fanahiana momba ny vola ankehitriny sy ho avy, tsy misy amintsika tsy voan'ny ketraka ary mety hisy vokany ratsy eo amin'ny vatantsika sy ny saintsika izany. Eny, mety samy hafa ny fomba hiatrehantsika azy io, fa misy akony eo amintsika rehetra izany.
Fantatray fa tsy voafetra ho an'i Cayman fotsiny io; nahita tatitra marobe momba ny olana isan-karazany mifandraika amin'ny fahasalaman'ny saina sy ny fiatrehana eran'izao tontolo izao izahay.
Ny fahasalamana ara-pihetseham-po dia tena zava-dehibe ho antsika rehetra, ary araka ny nolazain'ny praiminisitra tamin'ny fiandohan'ny herinandro dia olombelona avokoa isika rehetra ary mety hanjary:
Ny tsy matory
Mampiahiahy ny amin'ny ho avy
Na mety miala amin'ny mpianakavintsika mihitsy aza isika rehefa miatrika ilay antsoin'ny sasany hoe "tazo kabine" amin'ity toe-javatra tsy fahita firy ity.
Manentana anao aho amin'ity marika enina herinandro ity, mba hijerena, hanombatombana ny fahasalamanao sy ny fianakavianao ara-tsaina.
Aleo manontany tena isika: Misy zavatra kely miala kely fotsiny ve? Sa tena off? Mandany fotoana ampy amin'ny fanaovana zavatra tsara ve ianao? Manao fanatanjahan-tena ve ianao? Mihinana salama sy mihinana ampy ve ianao? Tsara ve ianao ary mitantana tsara be loatra?
Misy hazavana kely ao amin'ny zavatra mahatsapa ho toy ny haizin'ity areti-mandringana ity na izany aza, amin'ny nametrahany ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fiatrehana ny aretin-tsaina eo amin'ny sehatra manerantany amin'izao fotoana izao.
Afaka miresaka bebe kokoa momba ny olantsika manokana isika ary mitady moramora kokoa ny fianakaviantsika sy ny namantsika ary manome tanana fanampiana satria mahatsapa isika fa mora iharan-doza.
Faly aho milaza fa ny mpiasan'ny minisiterako sy ny tenako dia efa niomana tamin'io hatramin'ny voalohany ary nanana ny fanampiana sy fanampiana ho an'ny besinimaro mba hiadiana amin'ny ady maika amin'ity olana ity.
Ny hafatro anio dia ny milaza fa tsy maninona ny TSY milamina ary azafady raha tsapanao fa ilaina izany dia antsoy ny fanampiana momba ny fahasalamana ara-tsaina amin'ny 1-800-534-6463, izany no 1-800-534 (MIND), isaky ny alatsinainy sy Zoma 9 maraina ka hatramin'ny 5 hariva hiresaka amin'ny olona afaka manampy anao na ny fianakavianao amin'izany. "
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena any Ontario: takiana ny firakofana
Ny Project Hope avy amin'ny ATB dia mitarika ny famerenana ny fizahantany eto Afrika